Si Aad Dhibaatooyinkaaga U Xalisid Waa Inaa Adeegsataa Shantaan Qodob Ee Cajiibka Ahh.. – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Si Aad Dhibaatooyinkaaga U Xalisid Waa Inaa Adeegsataa Shantaan Qodob Ee Cajiibka Ahh..
August 28, 2014 August 27, 2014 0
Naguma jiro qof bani aadmi ah oon dhibaato la kulmin. Qofkaste oo naga mid ah si joogto ah ayu ula kulma mushkilado kala duwan ama ha yaraate ama ha weynaato, ama dhinaca reerka, ama dhinaca shaqada, ama dhinaca asxaabtaba ha ahaate mushkiladuhu dhinac kasta ayey naga hareeraysanyihiin. Sideed u xalin lahayd, sii akhri si aad uga faaidaysato:
1. Bedel qaabka aad u eegaysid dhibaatada: marka ugu horeesa dhibatadu waxay kula muuqan doonta dhib wayn, laakin hadaad inyar aad u fiirsatid oo maskaxda dajisid waxaad arki doonta xaqiiqda ah inaanay ahayn dhibaato sidaa u wayn. Waxaad u baahantahay inaad wakhti yara siisid kana fakirtid xalkeeda.
2. Ha ka warwareegin mushkilada ama dhibaatada: sida ugu wanaagsan aad u xalin kartid waxa weeye inaad waajahdid ama hor istaagtid dhibaatadan ku soo food saaran. Markaad ka warwareeg biloodid dhibaatadu way sii weynaanaysa. Si wax ku ool ah oo uguna dhakhso badan muskilada u xali.
3. Xalka ugu macquulsan raadi: ha is odhan xal mushkilada u keen oo kaliyaata, xalkaagu ha noqdo ka ugu macquulsan. Xalkaad ka fakiraysidna yaanu noqon mid ku meel gaadh ah, ha noqdo xal mushkiladan si dhamaystiran u xalinaya. Hadaad xal ku meel gaadh ah keentidna mar uun ayey mushkiladu kugu soo noqon doonta. Si dagan xalka u raadi.
4. Fuli xalka: inaad si fudud afka xalka uga sheegta kugu ma filna. Waa inaad fulisaa xalka aad la timid. Laakin intaanad fulin xalka ka fiirso inu yahay xalka ugu haboon mushkiladaada oo aanan ku keenayn mushkilado kale. Ilaahay wakiisho markaad fulinaysid xalka.
5. Iska ilaali niyad jabka: Ilaahay ayaa qadarka gacanta ku haya waligaa ha niyad jabin, Ilaahay ku kalsoono, qadarkana aamin oo ku qanac. Hadaad niyad jabtid dhibaatadu way sii waynanaysa waxna xalin kari maysid, diiqad badan ayaad dareenmi doonta rajaduna way kaa lumi doonta.
Ilaahay ha kugula garab galo dhibaatoyinkaaga. Aamin, aamin..
Xulka qaranka ee falaaro-ganka Soomaaliya !Inkasta oo aysan ahayn wax lala yaabo, hadana waxaa arrin qariib ah, islamarkaasina durba maskaxda caadiga ah ay malayn karto, in Soomaaliya ay leedahay xulka qaranka ee Falaaro-Ganka.
KaLaFoGe December 2, 2013
Jaceylka Dhabta Ah Iyo Guusha Lamanayaasha Warbixin Xasaasi Ah.
KaLaFoGe February 23, 2013 February 22, 2013
Akhriso Qormo Cajiib Ah Murug Badan Ku Haaysatay Aad Ku Iloobi Doontid “Ha Murgoon”.
KaLaFoGe June 10, 2014